စုံတွဲများအကြားညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကွာခြားချက်များ - ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်ဆံမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်နွယ်သောအသင်းများ (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
စုံတွဲများအနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်ကွာခြားချက်များ: ကျေနပ်မှုနှင့်အတူအသင်း, တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းစဉ် (2015)
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2015 ဇူလိုင် 31 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
Willoughby BJ1, ကာရိုး JS, မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ် DM, ဘရောင်း CC ကို.
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကြားဆက်ဆံရေးရလဒ်များနှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအကြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပုံစံများဆနျးစစျဖို့လိင်ကွဲရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက် 1755 အရွယ်ရောက်ပြီးသူစုံတွဲများတစ်နမူနာအသုံးပြုသွားမည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်အချို့အပျက်သဘောနှင့်အချို့သောအပြုသဘောစုံတွဲရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နေစဉ်, အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုသေးမိတ်ဖက်များအကြားခြားနားချက်များထူးခြားဆက်ဆံရေးမျိုးသုခချမ်းသာနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့သည်။
ရလဒ်များညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်မိတ်ဖက်များအကြား သာ. ကွီးမွတျကှာဟလျော့နည်းဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနည်းတည်ငြိမ်မှု, လျော့နည်းအပြုသဘောဆက်သွယ်ရေးနှင့်ထို့ထက် ပို. relational ကျူးကျော်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့အကြံပြုသည်။ ဖျန်ဖြေခြင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကှာဟအဓိကအား, အထီး relational ကျူးကျော်၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူနိမ့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များအတွက်အနိမ့် relational စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များအတွက်လျော့နည်းအပြုသဘောဆက်သွယ်ရေးဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြုလေ့လာဆန်းစစ်။
ရလဒ်များယေဘုယျအားဖြင့်ထိုစုံတွဲအဆင့်မှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကှာဟအနုတ်လက္ခဏာစုံတွဲရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထူးညစ်ညမ်းကွဲပြားမှုအလှည့်အတွက်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအရာ, တိကျသောဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအပြန်အလှန်ဖြစ်စဉ်များပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ ပညာရှင်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစုံတွဲဖြစ်စဉ်ကိုနှင့်ဆက်စပ်သည်ကိုမည်သို့စိတ်ဝင်စား Clinician များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။